Bitcoin Offshore Bank Account Kubvuma Cryptocurrency
Bitcoin nemamwe cryptocurrencies zvinopisa, zvinofamba nemisoro nhasi. Nekudaro, ruzivo rwakawanda rwuri kuyangarara pamusoro zvekuti runogona kuita kuti kushandisa Bitcoin kuitike sekuvhiringidza. Muchokwadi, Bitcoin iri nyore kushandisa. Kungofanana nekuwona terevhizheni, haufanire kunzwisisa zvimiro zvakaoma zvekuti paTV inoshanda sei kuti iwe ugone kuishandisa.
Paunenge uchinge uchinge uine Bitcoin, iwe ungangoda kuishandisa nenzira yechinyakare. Kupfuura zvese kwete munhu wese, uye kunyanya kwete vese bhizinesi rinogamuchira Bitcoin. Panguva imwecheteyo, iwe unogona kunge uchida kuvimbisa huwandu hwokuzvimirira uye kusingazivikanwi kuti mari yemadhipatimendi. Kuti uite izvi, vanhu vazhinji vanotarisira cryptocurrency kana Bitcoin offshore bank account. Mune mamwe mazwi, ivo vanoda nzvimbo yekuchengetera avo e-mari parutivi kubva paApp pane mbozhanharembozha; kana nzvimbo yekuchishandura kuva mari uye kuimisa kunze kwenyika nekutora mukana offshore banking.
Nokuda kwemugumo mutsva, unogona kukurukura nemudzidzisi ane ruzivo kuburikidza uchishandisa nhamba dzefoni kana fomu fomu peji ino. Tine ruzivo rwekunze kwebhangi dzebhangi dzinogona kutora Bitcoin yako uye imwe cryptocurrency. Panguva iyi, verenga zvakanyanya kuti uwane mamwe mashoko.
Chii chinonzi Bitcoin?
Kutanga, chii chinonzi Bitcoin? Bitcoin imari yakagadzirwa mu2009. Iyo imhando yemari yakasarudzika yemari yedigital. Inoita kuti vashandisi vakwanise kubhadhara ipapo pakare kuna chero munhu ari mune chero chikamu chenyika. Bitcoin inoshanda isina centralized mutemo. Pane kudaro, Bitcoin inoshandisa peer-to-peer tekinoroji. Iyo Bitcoin network pamwe chete inotakura manejimendi ekutakurwa kwekutengesa uye kubviswa kwemari. Satoshi Nakamoto pakutanga akagadzira Bitcoin. Isu tinotenda kuti zita iri nderekure rakashandiswa nemuvambi. Veruzhinji havazivi zita chairo remunhu kana vanhu vakagadzira Bitcoin. Bitcoin yakatanga kuburitswa pasi peinesi reMIT.
Bitcoin inogona kushandiswa kutenga uye kutengesa zvinhu nemashando nenzira imwecheteyo semari yakawanda. Vashandi vanogona kutenga pizza, Amazon chipo makadhi, uye zvimwe zvinhu zvakangofanana semari uye makadhi emakadhi. Paunofunga nezvekuti Bitcoin inoshanda sei, zviri nyore kuenzanisa Bitcoin kushandisa kadhi yebhadhiro. Apo mubhengi webhangi yebhangi ari kushandisa bhizimusi ravo rekutsvaga mabhizimusi, vari kuwana mari yedijiti. Aya mabhengi emabhengi ebhangi anogona kushandisa purogiramu yeIndaneti kutumira uye kugamuchira kutengeswa kweferi. Izvi zvinoshandiswa neferi zvinomiririra mari inogona kubviswa mumari yemapepa. Izvo zvinokwanisika neBitcoin. Bitcoin inogona kuchinjana ku US madhora, Euros, kana chero ipi zvayo yemari yemari. Inogonawo kutengeserana zvakananga kwezvinhu kana zvibasa.
Kusiyana nemabhengi, zvisinei, kutengeswa kwakaitwa neBitcoin kunoitwa pasina munhu wepakati. Kuwedzerwa, hakuna mvumo yekubhadhara inosanganiswa neBitcoin. Bitcoin hainawo zvaunoda kuzivisa. Vazhinji vatengesi vanotanga kugamuchira Bitcoin uye mamwe maitiro e cryptocurrency. Bitcoin haisi iyo chete yedhijidhi yemari yemadhora. Kunewo Ethereum, Litecoin, nevamwe. Bitcoin ndiyo inonyanya kuzivikanwa uye yakashandiswa zvikuru.
Bitcoin Inoshanda Sei?
Zviri nyore kutanga kutanga kushandisa Bitcoin. Danho rokutanga nderokushandisa smartphone uye download app inobvumira vashandi kutenga kana kubhadharwa mu Bitcoin. Izvi zvinowanzoshandiswa seBitcoin wallet. Purogiramu inonyanyozivikanwa inonzi Coinbase. Vashandi vanofanira kutevera mirayiridzo pari purogiramu kuti vauye nekambani yebhangi kana debit kadi kune app. Kunyora zita rekushandisa rebhanki repaibhanhire nephasiwedi rinobatanidza nhamba yebhangi yebhangi. Kutsigira zviduku zviduku zvakaitwa pamusoro pezuva rimwe chete kusvika kwemazuva matatu zvinogona kuisanidza zvakare.
Bitcoin mibare inoshandiswa mune izvo zvinozivikanwa se blockchain. The blockchain inofanirwa nepeji yevanhu vose. Iyo yose Bitcoin network inotenderera pane blockchain. Zvose zvinotsigirwa zvekutengeserana zvinowanikwa mumutsetse. Nenzira iyi, Bitcoin wallets inogona kuverenga mabheji avo anoshandiswa. Zvitsva zvitsva zvinogona kuvimbiswa kuti zvive nechokwadi chokuti Bitcoins iri kushandiswa ndeyechokwadi inowanikwa ne spender. Kuvimbika uye kurongeka kwezvakaitika zve blockchain zvakachengeteka. Vanomanikidzwa nekrisptography kuitira kuchengetedza hutano hwevashandisi veBitcoin.
Bitcoin zvinyorwa zvinodhindwa kwehuwandu pakati peBitcoin wallets. Izvi zvinyorwa zvakanyorwa mu blockchain. Bitcoin zvikwata zvichengeta chivande chakavanzika che data chinonzi a private key kana mbeu. Iyi dheedhi inoshandiswa kuisa zvinyorwa. Ichi chinoshandiswa chinoshanda sehuchapupu hwemasvomhu kuti dzakabva kune muridzi weBitcoin yakakodzera chikwereti. The siginicha inoshandiswawo kudzivirira mutengesi kubva pakuchinjwa nemunhu chero ipi zvayo yakabudiswa. Nguva yekusimbisa inotevera Bhuku reBitcoin inopfupika. Zvose zvinotengeswa zvinoparadzirwa pakati pevashandisi. Vanowanzobatanidza network vanowanzovatsigira mukati memaminitsi e10.
Kutenga Bitcoin kunoshamisa zvikuru. Kuti uwane Bitcoin, vashandisi vanongotanga bhodhi rekutenga pane app ravari kushandisa seBitcoin wallet. Bhuku rebhangi yemuvashandi rave rabatanidzwa kune app saka hapana chikonzero chekupinda zvakare mubhadharo wekubhadhara. Mushandisi anobva apinda mari yavanoda kutenga. Pakupedzisira, mushandisi anocheka kutenga uye mutengesi wapera. Icho icho chiri nyore.
Tinoshevedza nzvimbo yepamusika yemakambani, yakadai senhare yefoni smartphone apo vanhu vanogona kutengesa mari yemadzitateguru ye Bitcoin uye vise versa a Bitcoin Exchange. Nzvimbo yakadaro inopa nzira iyo vanhu vanogona kutengesa mari yemadhora yemadhora, euro, yen, nezvimwe.
Shandisa iyo Coinbase App kubhadhara kana Kubhadhara
Bitcoin inogona kushandiswa pakugadzirwa kana kubhadhara nokukurumidza uye nyore nyore uchishandisa Bitcoin chikwama, chakadai seCoinbase. Pamusoro peKoinbase app, pane QR code icon iyo inogona kushandiswa kugadzira kombiji yekombiyuta kuti ibhadhe neBitcoin. Munhu anogamuchirwa anodikanwa anobata chiratidzo uye kRR code inoratidzwa. Mushandisi anogona kukwanisa kugovera kadhi yeKRR, iyo yakabatana yetsamba kana kero yemaeiri inobatanidza nemagwaro neayo ari kuita kubhadhara.
Nzira Yokubhadhara Nayo Bitcoin Kushandisa Coinbase
Kubhadhara kuri nyore. Iyi ndiyo mirayiridzo yakafanana neyiyo kunyora. Kana iyo purogiramu yakashanduka kubva pakunyorwa uku, mamwe emirayiridzo angasiyana.
Sarudza ye "Maakaiti" icon kune zvakaderera purogiramu yeCoinbase
Sarudza Bitcoin (BTC) Wallet.
Sarudza kadhi yekodhi yeKRR mukona yepamusoro yekona yebasa.
Sarudza "Ratidza Kero"
Dzvanya "Shandisa" kunyorera kana kutumira email yako yeB Bitcoin kana kuti "Copy address" kuitira kuti unongonongedza kero yako Bitcoin mune zvinyorwa kana email.
Kana uchangobva kugovana nekutaura kweBitcoin neaya anokubhadhara iwe, iye anogona kutevera "How To Pay Someone ..." mirayiridzo iri pasi apa.
Nzira Yokubhadhara Mumwe Munhu ane Bitcoin achishandisa Koinbase
Kuti uite kubhadhara Bitcoin kune mumwe munhu, mushandisi anogona kukumbira kuti payee text or email yake Bitcoin nhamba yenyaya.
Uyo ari kuita kubhadhara ndiye achanyora icon yeakaunti kusvika pasi pepurogiramu.
Sarudza imwe iyo Bitcoin wallet (kana imwe mari yakakodzera).
Zvadaro bata mufananidzo uri kumusoro kwekona yekona yeCoinbase app.
Pa peji rinotevera, nyora mari.
Pa peji rinotevera, kopi uye unamate nhamba yekambani kana kuti kero ye email inobatanidza muCoinbase app. Pinda mafairo akakodzera ekubhadhara.
Dzvanya kutsvaga. Zvadaro simbisai kubhadhara.
Izvi zvinoshanda nenzira yakafanana nenzira yekuita kutengesa firi uchishandisa mari yakawanda.
Bitcoin iri kuwedzera kuve yakakurumbira nekuti inopa vashandisi nezvibatsiro zvakawanda pane yakajairwa mari. Kune imwechete, iwe unogona kushandisa Bitcoin kuita kutenga zvakavanzika. Kune imwe, Bitcoin haidi chero ID yekushandisa. Izvi zvinobva zvaita mari yakakodzera kuvanhu vasingade kuramba vasingazivikanwe. Izvo zvakakodzerawo kuvanzika-kuziva kana avo vanogara munzvimbo dzine underdeveloped yemari zvivakwa.
Bitcoin software inonyorwa zvakanyanya. Nekuda kweizvozvo, nyaya dzeBitcoin dzichibiwa hazvinyanyoitika. Inenge nyaya dzese dziripo dzekubira dzakaitika kana munhu aive neBitcoin anga asina hanya nephasiwedi kune yavo dhijitari account. Chero bedzi password ichidzivirirwa, Bitcoin inopa zvakanyanya kuchengetedzwa kupfuura yakajairwa mari.
Zvingave nyore kwazvo kuti mubari abve mari inochengeterwa imba pane zvaizoitirwa ivo kuba Bitcoin pasina password. Iyogi inonyora vatengi uye vatengesi veBitcoin haina kumbobvira yaratidzwa. Chete chikwama ID ID yevashandisi veBitcoin chinoratidzwa. Izvi zvinobvumira vashandisi kuchengetedza zvakavanzika panguva imwe chete vachiita kutenga nekutengesa zviri nyore. Kushandiswa kweBitcoin zviri pamutemo zvakakwana. Inogona kushandiswa munzira dzose dzekufambiswa kwepamutemo nenzira imwechete iyo mari nemakadhi echikwereti anoshandiswa.
Kushandiswa Kwenyika Dzese
Bitcoin haina muganho uye inoda pasina mvumo yekushandisa. Kana zviri zvekunyora uku, hazvitongeswe nenyika chero ipi zvayo pasi. Izvo zvinogona kuchinja. Mari yacho ndeyekudzivirira nekuti hakuna munhu anokwanisa kuvhara kana kusunungura kutapurirana kwe chero huwandu. Kubhadhara kwenyika dzakawanda zvakare zvakareruka kugadzira neBitcoin nekuti iyo mari haina kusungirirwa kune chero yakatarwa masimba.
Nekuda kweizvi, mari yekushandura mari inobvisiswawo inobviswa. Kushandisa Bitcoin zvakare kunobvisawo imwe mari iyo inozivikanwa nekutengeserana kwemari, senge dzechikwereti kadhi. Vamwe vanhu vanotenga Bitcoin sekudyara. Vanozviita vachitarisira kuti Bitcoin ichawedzera kukosha mumakore. Nhoroondo yemari ichangoburwa inoratidza kuti kuenderera mberi kukoshesa kungangoitika, asi Bitcoin inogona kana kuti ingasaita basa rekudyara. Kunyangwe isu takaona kukura kunoshamisa munguva yakapfuura, haina kuvimbiswa kuti zvichaitika mune ramangwana.
Kufungidzira kwemari kunogona kusatarisirwa zvakanyanya. Nenzira iyi, kufungidzira nezvekukosheswa kweBitcoin hakuna zvakasiyana kunze kwekufungidzira pamari yakajairika. Zvichitaurwa zviri nyore, Bitcoin inzira yekutenga zvinhu. Iyo nzira yainokwira nayo ndeyekuti kana mumwe munhu akauya pamwe anogamuchira kubhadhara zvakanyanya kupfuura iwe.
Kubatsira kukuru kweBitcoin hakusi kukosha kwayo semari yekutsvaga, asi muhutano iyo inopa. Nemhaka yokuti vashandisi veBitcoin havafaniri kunyora mazita avo, kutengesa kunoramba kusingazivikanwi. Bitcoins haigoni kudhindwa kana kusvibiswa. Asi 21 Mamiriyoni Bitcoins achazombovapo. Havana mari yekuchengetedza uye havatore nzvimbo chero ipi zvayo. Somugumisiro, Bitcoin inogona kunge yakaratidza kuti ndiyo mitsva yemarudzi akawanda emari.
Bitcoin haizoderedzeri kukosha kwemotokari dzemitemo yekunze kwekuchengetedzwa kwemari. Chaizvoizvo, zvakasiyana ndezvechokwadi. Kushandiswa kwemasangano ebhizimisi e-offshore kunogona kuwedzera kuvanzika nekuchengetedzwa kunowanikwa nekushandisa Bitcoin.
Zvinokwanisika kuwedzera ruvengo rwakapiwa kuburikidza nekushandiswa kweBitcoin nekunyora dhidhijiti yedijiti inobatanidza neBitcoin kune imwe kambani yeyokunze. Izvi zvinoumba humwe hutatu hwekuparadzanisa pakati peBitcoin uye muridzi wavo. Somugumisiro, nzira iyi inokosha zvikuru yekuchengetedzwa kwemari. Iyo yakachengetedzwa yakanakisisa yeBitcoin inogona kuwanikwa kuburikidza nekushandiswa kwekambani yekunze.
Offshore makambani anopa kudzivirirwa kwakanakisisa kweBitcoin nekuti kune dzimwe nyika dzakadai seNevis, Belize uye Cook Islands, havasi pasi pekutonga kwemisha. Somugumisiro, kana kutongwa kuchiitwa kune munhu muUnited States, vatengesi vemunhu iyeye vachava nenguva yakaoma yekuraira kubatwa kweBitcoin yakabatwa mune imwe nhoroondo yakanyoreswa kune imwe nyika yekunze. Ungada mamwe mashoko pamusoro peBitcoin offshore bank account? Iwe unogona kushandisa nhamba kana fomu fomu peji ino kuti ukurukure neunyanzvi akadzidziswa.